BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal - Weriyihii 16aad oo lagu dilay Laas-Caanood
Weriyihii 16aad oo lagu dilay Laas-Caanood
BBC Somali, London
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 24 Oktoobar, 2012, 19:08 GMT 22:08 SGA
Weriyaha Xalay lagu dilay magaalada Laas Caanood Axmed Faarax Ilyaas waxa uu u shaqeynayay telefishinka ku hadla af Soomaali oo la yiraahdo Universal.
Axmed Faarax Ilyaas waxa uu u shaqeynayay Universal TV Weriyaha Xalay lagu dilay magaalada Laas Caanood Axmed Faarax Ilyaas waxa uu u shaqeynayay telefishinka ku hadla af Soomaali oo la yiraahdo Universal.
Allaha u naxariistee waxa uu Axmed Rag hubeysan ku toogteen xalay magaalada Laas Caanood oo shalay qarax uu ka dhacay.
Waxaan haddaba ka wareysanay sida waxa u dheceen In jineer Axmed Abuubakar, oo ah Agaasimaha Maamulka Telefishinka Universal., Cabdiraxmaan Koronto ayuu telefonka ugu warramay.
Waxaa uu sheegay in aan la garanaynin cidda rasmiyan ka dambaysa dilka, balse Soomaaliya oo dhan weriyayaasha lagu bartilmaameedsaday oo ay ka mid yihiin Muqdisho, Gaalkacyo iyo gobolo kale oo Soomaaliya ah.
Agaasimaha Universal, wuxuu sheegay in dilkan uu sababo badan salka ku hayn karo, oo ay ka mid yihiin khilaafka ka dhaxeeya Somaliland iyo kooxaha halkaas ka jira, waxaa kaloo uu noqon karaa arrin shaqsi.
Axmed Abuubakar, ayaa sheegay in hadda ay ka war sugayaan baaritaanka maamulka Somaliland ee ku aadan dilka weriye Ahmed Faarax Ilyaas.
Hindise xabadda lagu joojinayo Qaza
25 Luulyo 2014
Wiil afkiisa 232 ilig laga soo saaray
Burburka diyaaradda Algeria oo la helay
Barlamaanka oo ka walaacsan amni xumada04:18
Sida loo bixiyo sakaatul fitriga 03:56
Taariikhda Saado Cali Warsame27:42
Bil kaddib mamnuucista Qaadka ee UK 21:19
Hiba: waa in dadka laga wacyi geliyaa gudniinka07:05
Wareysi aan la yeelanay Majaajileyste wiil waal03:51
Saameynta xannibaada Khat ka bil ka dib03:27
Go'aanka ka soo baxay shirka Gabdhaha03:53
Ma la joojin karaa gudniinka hablaha?03:48
Maalgalinta howlgabka ee dalalka ka hooseeya saxaraha00:43
Sawirro: Taalladii loo dhisay xasuuqii Waagala oo la burburiyay(none)
Sawirro: Brunei kaddib markii shareecada lagu soo rogay(none)